Gam akporo nwetara 90,9% ahịa na Spain | Gam akporosis
Gam akporo karịa 90% ahịa na Spain
Edere Ferreno | | Noticias, Gam akporo nsụgharị
Android bụ ihe eji arụ ọrụ sistemụ na ekwentị. Mana afọ gara aga ọ nweela nnukwu mmụba, ọkachasị n'ahịa ndị Europe na Spen. N'ezie, n'ihe banyere Spain, adịlarịrị nso 90% òkè ahịa tupu ngwụcha afọ. Ya mere, ọ dị ka oge tupu ọ ga-eru oke ahụ. Ihe nke merela.
Na nkeji iri na ise nke afọ a, a hụla ya dị ka gam akporo gafere 90% òkè ahịa maka oge mbụ. Hapụ ebe dị anya n’azụ iOS, nke na-aga n’ihu na-efunahụ ya n’ahịa, dọkpụrụ ala site na ahịa dara ogbenye nke ọgbọ ọhụrụ iPhone.
Gam akporo bidoro ike n’afọ a, nwere oke ahia nke 90,9% na Spain. Nke a bụ ịrị elu nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 5% karịa otu oge n'afọ gara aga. N'ihi ya, ọ bụ ezigbo ọganihu nke sistemụ arụmọrụ Google. Ọ bụ ezie na iOS ka nọ na ọdịda efu, na-esi na 13,6% afọ gara aga gaa 8,9% ugbu a.
Na mgbakwunye, na nkeji nke mbụ nke afọ a ọ dị ka nke ahụ Samsung ka bụ akara kacha ere ere na Spain. O yiri ka Galaxy S10 ha na-enwe ezigbo nnabata, ebe ọ bụ na Galaxy S10 na-anọchite ọkara nke ahịa nke ekwentị nke ụdị Korea na ahịa. Ọzọkwa, ahịa ya ga-arị elu.
Ọdịda nke iOS bụ ihe na-aputa ihe na tumadi na European larịị, ebe gam akporo doro anya n’ahịa. Na United States, sistemụ arụmọrụ Apple bụ ihe a na-ejikarị eme ihe. Ọ bụ ezie na ụwa achọpụtala ụfọdụ uwe, n'ahịa ndị dị n'Eshia ọ dara ntakịrị.
Ọ bụ ezie na n’ọnọdụ ọ bụla ọ dara dị ka ahịa Spanish. Ọ ga-adọrọ mmasị ịhụ otu agha a si aga n'ihu na ọnwa ndị na-abịa, ugbu a na Android karịrị nke a 90% ahịa òkè maka oge mbụ. Kedu ihe ị chere gbasara ọdịiche ndị a na ahịa ahịa?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Nkuzi » Gam akporo nsụgharị » Gam akporo karịa 90% ahịa na Spain
Google Play ga-ewe ndị ọrụ ọzọ iji nyochaa ngwa
Google Maps ga-agwa gị otu ụgbọ oloko ị ga-aga